ဂျူဂျူးကေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း. - Yangon Media Group
]]ကြီးမြတ်သောမြန်မာ}} ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မိဖုရားတစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင် ဂျူဂျူးကေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း. …. …။
မေး – မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ]ကြီးမြတ်သောမြန်မာ}ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာရော ဘယ်လိုကာရိုက်တာနဲ့ပါဝင်ထားလဲ။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားထဲက ကာရိုက်တာကတော့ မင်းသားတစ်ပါးရဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာက နိုင်ငံတကာကစံနှုန်းအတိုင်းပဲ။ ဝတ်စုံတွေမိတ်ကပ်တွေ ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ်လုပ်ရတာက ကိုယ့်ကာရိုက်တာအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။
မေး – ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဂျူးရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားက မြန်မာဇာတ်ကားတွေထဲမှာဆိုရင် ပထမဆုံး ၃ီ ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကလည်း အချစ်၊ အလွမ်းအဆွေး ဇာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်ီးသခကာနညအမေပ ဆန်တယ်ဆိုပေမယ့် ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တာ ကြောင့် ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့သူတွေ မရိုးသွားနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို လာကြည့်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်းကျကျသမိုင်းကြောင်းကို မြန်မာလူမျိုးတွေသိသင့်တယ်။ ဒီ ဇာတ်ကားလာကြည့်ရင် ကိုယ်မသိသေးတဲ့အပိုင်းတွေကို တော်တော်လေးကို သိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မေး – ဒီရက်ပိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ထုတ်လွှင့်နေတယ်နော်။
ဖြေ – ဒီလတ်တလောပိုင်းမှာ ပြနေတဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ ]]ငွေ စက္ကူ ၇ရွက်}}ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ ]]အလင်းထဲကလူ}}ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးပါပြီ။
မေး – လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကရော။
ဖြေ – ကြားထဲမှာကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရိုက်နေပါတယ်။
မေး – ကိုဇဏ်ခီတို့နဲ့ လက်တွဲပြီးလုပ်ရတာရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – ကိုဇဏ်ခီတို့နဲ့ရိုက်တဲ့ သြတ ရနလနမ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ ရုံတင်ဖို့အတွက် အချောသပ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ထဲမှာတော့ တင် နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုဇဏ်ခီတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းကိုအဆင်ပြေ တယ်။ သူတို့က တကယ့်ကိုနိုင်ငံခြားဆန်ဆန်အသင်းအဖွဲ့ကြီးကြီးနဲ့ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပြီးလုပ်တယ်။ သူတို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။
မေး – အိမ်ထောင်ဖက်ကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်ပေးတယ်နော်။
ဖြေ – အမျိုးသားက အရမ်းကိုအားပေးပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး မလုပ်ရ တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကို သူလက်မခံဘူး။ အခွင့်အရေးရှိတုန်း လုပ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန်လုပ်သွားဦးမှာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အမျိုးသားကလည်း သူတတ်နိုင်တာကိုအမြဲကူညီပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းတစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရ ပါတယ်။ အဓိကကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကချစ်ကြတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း အရမ်းဝါသနာပါတော့ သူကအရမ်းလည်းအားပေးပါတယ်။
မေး – ပရိသတ်တွေကိုရော ပြောချင်တာများရှိဦးမလား။
ဖြေ – ပရိသတ်တွေ ဂျူးကို အိမ်ထောင်ကျသွားပေမယ့်လည်း ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အတွက် ကြောင့် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အလုပ်တွေအများ ကြီးဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်အကြံ ပြုပြီး ဆက်လက်အားပေးကြပါလို့ ပြောချင် ပါတယ်။